Tuesday March 13, 2018 - 13:52:24 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Somaliland ayaa gaadhay guud ahaan315Dugsi oo isugu jira kuwa sare iyo hoose/ dhexe oo u kala baxa78dugsiyo oo sare iyo237dugsi oo isugu jira Hoose / Dhexe iyo39ah kuwa boodhinka ah ee la seexdo.Tirada guud ee ardayda dhigata ayaa lagu qiyaasay ilaa120kunoo arday.Tirada maclimiinta dugsiyaas ayaa gaadhaya3468macalin oo ka tayo iyotacliinfiican macalimiinta dugsiyada dawalada wax ka dhiga.
Dugsiyadan tirada badan ee gaarka loo leeyahaywaxaa lagu dhigaa ilaa iyo6manhaj oo kala duwan sida manhajka, Sudaan, Kenya, masar, Yama iyo Turkiga . badanka Dugsiyadan ayaan manhajkoodu ku mudeysneyn sida manhajka qaranka JSL oo ah4-4-4taas oo macnaheedu yahay 4 sano oo dugsi hoose ah, 4 dugsi dhexe ah iyo 4 dugsi sare ah. Qaar ka mid ah dugsiyadaa waxaa maamula dad ajaanib ah oo looga baqanaayo in ay ilmaha la yeeshaan waalidka oo ay maskaxdooda wax kale ku shubtaan. sida dhaqano qalaad iyo diinxag-jirnimo ahoo aan diintaislamka aheyn. ka dib markii loo kuur galayee( risk assessment lagu sameeyey qaar ka mid ah dugsiyadaa) waxaalaga dhawaajiyey in qaar ka mid ah dugsiyadaaardeyda qaarkood laciqaabo gaar ahaandugsiyada boodhinkaah ee magaalooyinka ka baxsan oo tiradoodugaadhay39dugsi.
In kasta oo Wasaarada Waxbarashada Somaliland ay Waax gaar ah iyo Agaasime Waaxeed u sameysay dugsiyadaaskuna dadaashaysidii dugsiyadaa loo xakameyn lahaaeemanhajka dawliga ahloogu soo dabaali lahaa hadana ilaa iyo hada "Faanoole fari kama qodna" Maadaama maamulka Dugsiyadaasi ka madax banana yihiin Wasaarada Waxbarashada waxaanaMaareeyaha dugsiyada gaarka loo leeyahayku adkaatay in uu qaar dugsiyadaa ka mid ah uu gudaha u galo oo uu kala xaajoodo arimaha manhajka dowliga ah.
1- iyada oo laga cabsi qabo inardeyda dhigatadugsiyadaas madaxalaga bedelo ooay gacanta u galaanmacalimiin xag jir ahama qaar dhaqan qalaad,dhal-dhalaal been ah iyo diimoqalaad ku jiita ardeyda.
2- Qaar ka mid dugsiyadaa ardayduwaxaydhigtaanwaxbara sho kala dhiman maadaama qaar mudeynta manhajkoodu kusaleysan yahay 3-3-3 sanadood oo keliya.
3- Ka dib markiila sameeyey u kuur gal dahsoon,lana waraystayarday kala duwan oo ay ku jireenardey dhaqan celin loogu daraydugsiyadaagaarka loo leeyahay, ayaa waxay ardaydaasi hayadaha ku shaqada leh Badbaadada caruurta uxaqiijiyeen inay kala kulmeen Dugsiyadaas oo boodhin ahaa- jidh dil,nadaafad xumo,nafaqodaro cunto, hanjabaadjoogto ahiyohagardaamooyin kale oo aanay qeexin.
4- Nasiib daro dugsiyada gaarka loo leeyahaygaar ahaanShanta albaadada xidhay eeajaanibku maamulo may soo marin markii horeba Wasaaradda Arimaha Debeda ee JSL, mana laha qawaaniin iyo xeerar adag oolagu dhaqo, Albaabkana kamaba furaan Wakiilada wasaaradda waxbarashada ee howshaa loo igmaday.
5- Maadaama Wasaaradda waxbarashadu hawsheedii ka soo bixi wayday dugsiyadaana ay ka buuxaan ardey sita dhalashada wadamada reer galbeedka,Waxaa ku soo maqan dugsiyadaa qaarkood Hayadocaalami ah oonabadgelyada caruurta daryeela, sidaa daraadeed waa in ay dugsiyadaasi taxadar badan sameeyaan oo samaystaan qawaaniin iyo shuruuc cadaynaaya inardaydoodu gacan nabadgelyo ku sugan yahiin inta ay dugsiyadooda joogaan.
6-Waxay wasaaradda waxbarashadu ka gaabisayin ay dhamaystirto shuruucdiiiyo qawaaniintiiwaxbarashadagaar ka loo leeyahay iyo ta dawliga ahba lagu hagi lahaa laguna dhaqi lahaa.
7-Dugsiyadani haba yaraatee may soodhaweynku dhaqankameel marinta manhajka dowliga ah ee JSL
Wasaarada Waxbarashadunakumay dhiiranin ay yeelato awood ay rusqadaha kala noqonto.
11-Badanka dugsiyadaasi ma laha nimaadisku dheeli tiranoo lagukantaroolo waxbarashadooda ( quality insurance ) si loogu kal soo naado manhajyadooda ay ka soo waarideen dalalka debeda.
12- In kasta oo ay lacagbadanka qaadaan ardeyda dugsiyadaasi hadana qaar ka mid dugsiyadaasi ayaa tayada waxbarashadoodu aad iyo aad u liidataa.
13- Hadii aanay wasaaradu dar dar gelin in ay wadashaqeyn buuxda la yeelato dugsiyadaas waxaa dhici doonta in ardeyda dugsiyadaasi ay helaan fursadoloogu ogolaado in ay kuqishaan imtixaanka shahaadiga ah sida horeba loogu tuhmay.
Gunaanad:Waxaa Xukuumada cusub looga fadhiyaa in ay ka shaqeysiiyo Qorshaha Shanta sanadood ee waxbarashada JSL (2017 - 2021 -ESSP) kunafalkisosifeyaashii loo kantarooli lahaa dugsiyada gaarka loo leeyahayWaxaana lagasugayaa in ay soo nooleyso xukuumadu xidhiidhkii wada shaqeyneed ee dugsiyadaa iyo wasaaradda waxbarashada. Waana in ay dar dar geliso barnaamijka isku xidhka dugsiyada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay si ay isula jaan qaadaan isunacaawiyaan dhinac kastaba.